वृद्ध मा हिप भंग कसरी के निर्धारण र गर्न आतुर रिकभरी लागि
घर र परिवार, पुरानो मान्छे
एकदम अक्सर, रोग मा मान्छे संग परिहाल्छ बुढेसकालमा। तथ्याङ्क भंग संख्या 6% भन्दा उनको हिप मा पतन भनेर देखाउँछ। र 90% - वृद्ध मा। त्यहाँ भंग र जवान लागि राम्रो केही छ, तर एक भंग भएको femoral घाँटी को वृद्ध मा स्वाभाविक निको पार्नुहुन्छ लगभग कहिल्यै छ। यो कारण जोइन्टहरूमा, गठिया र osteoporosis को रोगहरु गर्न हड्डी को Thinning योगदान पुग्छ।
जब पनि एक एक भंग मा अस्वस्थ ऊतक परिणाम मा सानो दर्दनाक प्रभाव, त्यहाँ अवस्थामा छन् एक हिप भंग वृद्ध पनि एउटा सानो धक्का देखि हुन्छ। आफ्नै हिड्ने गर्दा तिनीहरूले, एक व्यक्ति एक्स-रेज बिना निदान गर्न गाह्रो छ किनकी प्रकार "प्रभावित जोइन्टहरूमा" को भंग खतरनाक छन्। कहिलेकाहीं sciatic स्नायु को उपचार - गलत निदान र उपचार वृद्ध मा एक हिप भंग भएको थियो।
जब श्रोणि स्थिर दुखाइ देखिन्छ, र तपाईं बारी वा उन्नत छ खुट्टा, उचाल्न प्रयास गर्नुहोस्, त्यहाँ वृद्ध मा एक हिप भंग शक हर कारण छ।
खुट्टा unnaturally मुड हुन र खुट्टा विमान गर्न लगभग ट्यान्जेन्ट छ भनेर गरिएका गर्न सक्नुहुन्छ।
खुट्टा उठ्नेछ गर्दैन र स्वतन्त्र घुमाउन छैन।
को स्वस्थ खुट्टा 2-4 सेमी संग तुलना एकदम छोटा।
"प्रभावित" जब पालो, संयुक्त विस्थापित हुँदा छैन, दुखाइ को कमर र तिध्रा बिचको भाग, एक स्थायी वर्ण लगाएका महसुस र ड्राइभिङ गर्दा मात्र परिलक्षित छ।
डाक्टर को आगमन अघि के गर्न
तुरुन्तै एउटा एम्बुलेन्स कल गर्नुपर्छ।
आफ्नो पछाडि ओछ्यानमा रोगी राखे।
दुखाइ दबाइ दिनुहोस्।
आफ्नो घाइते खुट्टा जोडहरुको को जफती, को गोडा र हिप संग, यो सार्दा बिना समाधान गर्न, र सीधा छैन: प्रयास गर्नुहोस्।
fixation को अभाव मा, रोगी आफ्नो खुट्टा फ्लैट तकिया मा forefoot अन्तर्गत बालुवा वा जोडेको नरम तन्तु को मनका साथ रोलर्स राख्नु राखे।
उपचार र पुन:
पहिलो केही मिनेटमा यो एक गिरावट र पीडा देखि तनाव धेरै अनुभव छ जो बिरामी व्यक्ति समर्थन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी उहाँलाई शान्त र वृद्ध मा एक हिप भंग भनी विश्वस्त गर्न प्रयास गर्नुपर्छ - यो उचित उपचार, रोगी इच्छा र पूर्ण जीवन धेरै आफ्नो चोट देखि ठीक र बाँच्न प्रयासमा सँग, मृत्यु वाक्य छैन।
उपचार शल्य वा रूढिवादी, सर्जरी छैन सम्भव जहाँ किनभने बिरामीको सामान्य अवस्थाको या त हुन सक्छ। वृद्ध मा हिप भंग को सर्जरी - रोगी लागि गम्भीर परीक्षण, तर यो थप दृढ विशेष प्रविधी को सहयोग संग संयुक्त समाधान दिन्छ।
सर्जरी सम्भव छैन, र रूढिवादी उपचार राम्रो परिणाम दिन भने, रोगी डाक्टर को सबै सिफारिसहरू निम्नानुसार र पुन: प्राप्त गर्न हरेक प्रयास गर्ने प्रदान।
सर्जरी पछि र रूढिवादी उपचार मा विरामीहरु ख्याल
सञ्चालन गर्ने निको पार्ने सुरुमा भयो जब दुखाइ 5-7 दिनको लागि यथावत्। रोगी घर छ भने, painkillers, सहानुभूति देखाउन, प्रोत्साहन र उहाँलाई आश्वस्त पार्नुभयो गरौं गरेको।
प्रारम्भिक दिन मूत्र असंयम हुन सक्छ मा, उचित उपचार र हेरविचार संग, नआत्तिनुहोस्, समस्या चाँडै निर्मूल गरिनेछ।
पुरुष र महिला दुवै लागि मूत्र मोड लागि सादा जार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं यसलाई defecation लागि सबैभन्दा सुविधाजनक छ, जहाज "LADA" किन्न आवश्यक छ।
रोगी तरल पदार्थ प्रशस्त पिउने सधैं सुनिश्चित गर्नुहोस्। sodas, उपयुक्त हर्बल चिया, दही, फल, र दूध दिन आवश्यक छैन।
फाइबर (सलाद, फलफूल र तरकारी), डेयरी उत्पादन धेरै संग खाना को नियमित पालन गर्न निश्चित हुनुहोस्। आहार मा मासु धेरै दिन आवश्यक छैन चोकर समावेश, को आंतों peristalsis सुधार कि additives।
चिकित्सकीय अभ्यास हिप भंग एक निदान संग पुरानो मान्छे को लागि
तपाईं केहि यस नाम भन्न भने, आफ्नो डाक्टर सोध्नुहोस्, तपाईं सबै कुरा व्याख्या छौँ ओछ्यानमा भन्दा रोगी लागि, "बाल्कन फ्रेम" सन्तुष्ट। बिरामी व्यक्ति भेट्टाउने र हात द्वारा बिस्तर मा वरिपरि सार्न सक्छ लागि फ्रेम को उचाइ सहज हुनुपर्छ। पुनःस्थापना र सामान्य जीवन एउटा द्रुत फिर्ती को लागि, अनुसार डाक्टर गरेको सिफारिसहरू संग, चिकित्सा पुरानो व्यक्तिका लागि अभ्यास हुनुपर्छ।
को साँस, restorative शारीरिक शिक्षा गर्न पहिलो केही दिन पहिले नै: सक्रियतासाथ औंलाहरु को खुट्टा को, यो एक परिपत्र गति बनाउने, को टखने गर्नाले, ओछ्यानमा तल बस्न फ्रेम प्रयोग सार्नुहोस् जांघों र कम खुट्टा को मांसपेशिहरु फाटो।
ओछ्यानमा गर्नुहोस्, श्वास अभ्यास तिनीहरूलाई संयोजन, मुर्कुट्टा र टाउको के।
राम्रो खुट्टा र मांसपेशीमा टोन गुमाउनु छैन भनेर, सक्रिय वृद्ध लागि शारीरिक उपचार पछि लाग्न भूल छैन, र यो मा।
कुनै रेखाचित्र छ भने, एक डाक्टर निर्धारित अवधि कसरी crutches हिंड्न सिक्न आवश्यक छ। राम्रो उपचार संग, पहिले नै दिन5सञ्चालन दुई वा तीन हप्ता राख्न खुट्टा र crutches मोड र सीधा गर्न अनुमति पनि पछि।
avascular necrosis - यो उमेर बारेमा सम्झना गर्नुपर्छ, prematurely खुट्टा लोड गर्न सकिँदैन, यसलाई संयुक्त हड्डी टुकडे मा एक पारी, वा थप गम्भीर जटिलताहरू गर्न सक्छ। सक्रिय सत्र तीन वा चार महिना घाइते भएका खुट्टा शरीरको वजन को 30% भन्दा छैन लोड गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईं एक छडी वा बैसाखी को मद्दतले सार्न गर्न आवश्यक छ। पूर्ण पुनर्वास मात्र आधा एक वर्षमा सम्भव छ, र व्यावसायिक पुनर्वास - आठ महिनामा।
कसरी किशोरावस्था र वयस्क जीवनको मा फुलेको कपाल को छुटकारा प्राप्त गर्न
Hirudotherapy: को प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ र contraindications
5 तरिकामा हामी यसलाई साकार बिना आमाबाबुको गर्न दुखाइ कसरी
पुरानो उमेर पेन्सन को गणना, वा आफ्नै अवकाश विचार
संसारको सबैभन्दा पुरानो जोडाहरू दीर्घायु को रहस्य साझेदारी
अवधारणा, यसको सार बजेट। बजेट रेखाहरू। राज्य र स्थानीय बजेट
Cutlets कसरी तलना गर्न
Dubrovsky Reservoir वर्णन, मत्स्य पालन
मासुको चोक्टा - स्वादिष्ट र पौष्टिक भोजन
यो धूम्रपान छोड्ने महसुस? के शरीर हुन्छ?
कस्तो hangover मद्दत गर्छ: सबै भन्दा राम्रो तरिका रोक्न र व्यवहार गर्न